မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအမ်၏ ဇနီး Ri Sol Ju ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ - XYZ NEWS
Ri Sol Ju နဲ့ပတ်သတ်ပီး အရင်က မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ မကြာသေးမီက နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အကြားကျင်းပတဲ့ ချစ်ကြည်ရေးတွေ့ဆုံမှုမှာ တောင်မြောက်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ First Ladies တွေအတူတွေ့ရချိန်မှာတော့ Ri Sol Ju နဲ့ပတ်သတ်ပီး စိတ်ဝင်စားသူတွေများလာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Ri Sol Ju ရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံပါ။ မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း သူမရဲ့ ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအတိုင်း ဝတ်ဆင်ခဲ့ပီး ဒီလိုပုံစံကို လူတော်တော်များများက သူမရဲ့ယောက်ခမကြီး ကင်ဂျုံအီ ဈာပနအခမ်းအနားမှာကတည်းက သထိထားမိခဲ့တာပါ။ ထူးခြားချက်ကတော့ သူမဟာ အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ First Lady လမ်းလျောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။
မီဒီယာတွေရှေ့မှာ သူမကို ပုံမှန်စတင်တွေ့ရချိန်က ၂၀၁၂ မှာဖြစ်ပီး သူတို့နှစ်ဦး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တချို့ကလည်း ၂၀၁၀မှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပီး ကင်ဂျုံအမ်က ရေရေရာရာထုတ်မပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ထုံးစံအရ ယောက်ျားလေးဦးစားပေးစနစ်ပါ။ အစကတည်းက ကင်ဂျုံအမ်က သူ့ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို လျို့ဝှက်တတ်သူပါ။ ဘယ်သူမှလည်းမစပ်စုရဲကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းလျို့ဝှက်သူကြီး ကင်ဂျုံအမ်ရဲ့အနား Ri Sol Ju အမြဲပါနေရတာက သူမဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ?? သူမဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့ ဆိုင်လာပါတယ်။
၁၉၈၉ စက်တင်ဘာ ၂၈ မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Ri Sol Ju ဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ကင်ဂျုံအမ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရိုးမှန်ရင် သူမဟာ ဆယ်ကျော်သက်ပဲရှိအုံးမှာပါ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲဟာ ဖခင်ကြီး ကင်ဂျုံအီ ရဲ့စီစဉ်မှုဖြစ်နိုင်ပီး လက်မထပ်ခင်အပြင်မှာ သီးသန့်တွေ့ဆုံမှုတွေများများရှိခဲ့ပုံမရပါဘူး။
သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မီဒီယာပေါ်က ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်သွားခဲ့တယ်…..
တော်တော်များများကတော့ ကင်ဂျုံအမ်မှာ ကလေးမရှိဘူးလို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လျို့ဝှက်သတင်းတွေအရ ကင်ဂျုံအမ်မှာ ကလေးရှိပီး Ri Sol Ju ဟာ ထိုကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မီဒီယာပေါ်က ခဏတာပျောက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
NBA ကစားသမားဟောင်း Dennis Rodmen ဟာ ကင်ဂျုံအမ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံမှုရှိပီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ တော့ ကင်မိသားစုမှာ ဒုတိယမြောက်ကလေးရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် Ju Ae ကလေးကို ချီဖူးပီး Ri Sol Ju နဲ့လည်း စကားစမြည်ပြောဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကတော့ သူမကို ကလေးသုံးယောက်အမေလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်…..
လူနည်းစုသာ သိကြတဲ့ ကင်မိသားစုရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အသက်နဲ့ ယောကျ်ားလေးလား မိန်းခလေးလားဆိုတာမသိပေမဲ့ ၂၀၁၇မှာ Ri Sol Ju ခဏတာ ပျောက်သွားတာပေါ်မူတည်ပီး တတိယကလေးရှိနိုင်ကြောင်းယူဆကြပါတယ်။ ပထမဆုံးကလေးဟာလည်း ယောက်ျားလေးဖြစ်ပီး အဖေ့နေရာဆက်ခံမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။
Ri Sol Ju မိဘတွေဟာ ချမ်းသာပီး ပညာတတ်မျိုးရိုးဖြစ်တယ်……
Ri Sol Ju ဖခင်ဟာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်ပီး မြောက်ကိုရီးယားလေတပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ မိခင်ကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ သူမမှာ မွေးခြင်းရှိမရှိဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတဲ့။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အဆိုဝါသနာထုံသူ Ri Sol Ju ဟာ တရုတ်မှာ သီချင်းဆိုပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ မြောက်ကိုရီးယား Unhasu Orchestra အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဟာ Unhasu Orchestra အဖွဲ့ဝင်အချို့ကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ကောလဟာလပါလို့ ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အားကစားအသင်း အလံကိုင်မယ်လေးအဖြစ် တောင်ကိုရီးယားကို ခြေချခဲ့ဖူးတယ်…
သီချင်းဆိုသင်ပီးနောက်ပိုင်း Ri Sol Ju ကိုလူသိများလာခဲ့ကာ သူမဟာ အလံကိုင်မယ်လေးအဖြစ်တော်တော်များများမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်က တောင်ကိုရီးယားမှာ ကျင်းပတဲ့ အာရှအားကစားပွဲတော်ဖြစ်ပီး ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေကပဲ ကင်ဂျုံအမ်ကို မျက်စိကျစေခဲ့တာပါတဲ့။
တရုတ်နိုင်ငံအလည်အပတ်ခရီးမှာ သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံက အဆင့်အတန်းရှိလွန်းတယ်…..
၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံအလည်အပတ်ခရီးစဉ်မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Ri Sol Ju ဖက်ရှင်ဟာ ဟောင်ကောင်ဒီဇိုင်နာတွေ ပုံတူကူးယူရလောက်သည်အထိ ဆန်းသစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာ ခေတ်စားခဲ့ပီး Chine First Lady နဲ့ခိုင်းနှိုှုင်းခဲ့လို့ တရုတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်ရလောက်သည်အထိပါ။
နာမည်ကြီး လက်ကိုင်အိတ်တွေနဲ့မစိမ်းတဲ့ သူမ
ခေတ်မီသူပီပီ နာမည်ကြီးလက်ကိုင်အိတ်တွေနဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့အသုံးအဆောင်တွေက သာမန်လူတွေအမြင်မှာ ရိုးရှင်းနေပေမဲ့ တကယ်တော့ တန်ဖိုးကြီးပီး လိုက်ဖက်တာတွေချည်းပါ။ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွက် သူမရဲ့ ဒီဇိုင်နာကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
သူမရဲ့အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့အကျင့်က မီဒီယာတွေသတိထားမိလောက်သည်အထိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားတစ်ပြည်လုံးနီးပါးငတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့မိသားစုက သန်းပေါင်းများစွာကို လက်လွတ်စပယ်သုံးစွဲနေလို့ပါတဲ့။
လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေက သူမရဲ့ အရှိန်အဝါနဲ့ပတ်သတ်ပီး အားကျ ကြပါတယ်…..
မိန်းခလေးတွေကို နှိမ်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာ သူမရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ အသုံးအဖြုန်းက ပြောစမှတ်တွင်လောက်အောင် မနာလိုစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ အရမ်းလည်းကြင်နာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အမေရိကားသွားဖို့ရှိတဲ့ Ri Sol Ju ….
သဘောတူညီချက်တွေအရ ကင်ဂျုံအမ်ဟာ အမေရိကားကိုသွားဖို့ရှိနေပီး ထိုခရီးစဉ်မှာ Ri Sol Ju ဘယ်လိုဖက်ရှင်ကျကျအဝတ်အစားတွေရွေးချယ်သွားအုံးမလဲ ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်တွေချပြသွားမလဲဆိုတာ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။